Habka ugu Wanaagsan ee Loo Maalgashan Karo $ 10000: Siyaabo Cusub Oo Lagu Kordhiyo Ilaa 5x Lacagtaada
Bogga ugu weyn Habka ugu Wanaagsan ee Loo Maalgashan Karo $ 10,000: Siyaabo Cusub Oo Lagu Kordhiyo Ilaa 5x Lacagtaada
Habka ugu Wanaagsan ee Loo Maalgashan Karo $ 10,000: Siyaabo Cusub Oo Lagu Kordhiyo Ilaa 5x Lacagtaada
Bernard Mannes Baruch waxaa badanaa laga soo xigtaa isagoo leh "Hadda had iyo jeer waa waqtiga ugu adag in la maalgashado." Had iyo jeer, habka ugu wanaagsan ee lagu maalgelin karo $ 10000 waa in hadda la bilaabo. Waan sharxi doonaa.
Habka ugu wanaagsan ee loo maalgashan karo $ 10000 oo ay u badan tahay inaad hesho 5x lacagtaadu weligeed kama aysan hadlin jidka, laakiin waxay ku saabsan tahay hubinta jidka iyo waqtiga maalgashiga la sheegay.
TVM (Qiimaha Waqtiga Lacagta) waa hal sabab oo wanaagsan oo ah in qof kastaa maal gashado. Investopedia waxay ku qeexday “fikradda ah in lacagta aad hadda haysato ay ka qiimo badan tahay wadar isku mid ah mustaqbalka sababta oo ah awoodda kasbashada ee suurtogalka ah.
Mabda'a asaasiga ah ee maaliyaddu wuxuu hayaa in lacag la bixiyay ay dulsaar ku heli karto, lacag kasta oo lacag ah ayaa ka qiimo badan sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo. TVM sidoo kale waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa qiime dhimis joogta ah. ”
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa siyaabaha ugu wanaagsan ee loo maalgalin karo $ 10000 iyo siyaabaha lagu helo ilaa 5x lacagtaada.
Waxaa jira waxyaabo badan oo qof kasta oo haysta lacag ku filan oo uu ku maal geliyo wax macno leh uu ka fekero ka hor inta uusan tixgelin hab kasta oo lagu maalgashan karo habka ugu wanaagsan.
Adiga oo aan haysan wax ku filan oo raba inaad sidaas oo kale samayso waxaad u baahan doontaa inaad fahanto sida arrimuhu u shaqeeyaan oo u xanaaqaan baahidaada inaad si taxaddar leh u maal gashato.
Warren Buffet wuxuu leeyahay "halista ayaa ka imaaneysa ogaanshaha waxaad sameyneyso."
Maalgashadayaashu maxay raadiyaan ka hor intaan la maalgelin $ 10000?
#1 - Taam
Inta badan habka ugu fiican ee qof doonaya inuu maalgashado $ 10000 isku mid ma aha qofka doonaya inuu maalgashado lacag ka badan. Tani ma aha kala duwanaanshaha wadarta, laakiin farqiga u habboon.
Qaar doonaya inay maalgashadaan $ 10000 waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan wax kasta oo ay tahay inay maalgeliyaan lacagtooda.
Habka ugu fiican ee lagu ogaan karo meesha ku habboonaantaadu waa in aad isweydiiso waxa aad hore u maalgashatay, iyo sida aad ugu raaxaysatay maalgashiga.
Haddii aad tahay maalgaliye cusub, waa inaad isweydiisaa waxa aad jeceshahay iyo haddii aad diyaar u tahay inaad raacdo.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska 21 Siyaabood Oo Lacag Looga Sameeyo New York (NYC) | Talooyin Aan La Faafin
#2 - Cabbirka
Cabbirku kaliya ma saameeyo xaddiga lacagta aad maalgelinayso laakiin cabbirka suuqa ee meesha aad u socoto, lacagtaadu waxay ku socotaa.
Cabbirka jeebabka maalgashadayaasha ayaa go’aamin doona halka uu dhigayo lacagtiisa, iyo baaxadda suuqa ayaa go’aamin doonta sida soo noqoshada maalgashi kastaa noqon doono.
Maal -gashade doonaya 5 jeer lacagtiisa la maal -galiyay ma awoodi karo inuu waqti ku qaato waxyaabaha qaarkood. Suuqa la beegsanayo waa inuu ahaadaa mid ballaaran.
Maalgashadayaashu sida caadiga ah waxay leeyihiin xoogaa tabasho ah oo ku saabsan gudbinta maalgashiga oo ku adkaan doonta inay koraan hal milyan oo doollar maalin uun, laakiin fursad si xarrago leh wax looga qabto suuq bilyan oo doollar ah waa mid xitaa maalgashadayaasha ugu taxaddar badan ay si taxaddar leh uga fiirsan doonaan.
#3 - Natiijooyinka
Mid ka mid ah sababaha ay maal -gashadayaasha qaarkood uga fogaadaan inay maal -gashadaan siyaabaha qaarkood ayaa ah iyadoo ay muuqato natiijo la'aan. Haddii meherad ama hab maalgashi oo cusub aysan soo bandhigin wax ballanqaad ah, markaa maxaa qof u tixgelin doonaa inuu lacag ku rido. Si sax ah uma dhawa.
Waa maxay maalgelinta qiimaha?
Schroders wuxuu qeexayaa maalgashiga qiimaha sida farshaxanka iibsashada kaydka ee ka ganacsada qiimo dhimis weyn qiimahooda gaarka ah.
Maalgashadayaasha qiimaha leh waxay tan ku gaaraan iyagoo ku raadinaya shirkado cabbirro qiime jaban ah, sida caadiga ah faa'iidooyinkooda ama hantidooda oo aad u hooseeya, sababo aan la qiil siin muddada dheer. Maalgashadayaasha qiimaha leh waxay aqoonsadaan laba shay.
Marka hore, meheradaha badankoodu waa dabeecad muddo-dheer saamaynta dhabta ah ee faa'iidooyinka muddada-gaaban waxay ku dhacdaa qiimaha muddada-dheer ee ganacsigu inta badan waa yar yahay.
Marka labaad, waxay garwaaqsan yihiin in, celcelis ahaan, faa'iidooyinka shirkadu badankoodu ay yihiin kuwo celcelis ahaan dib u rogaya. yacni muddada dheer, faa'iidooyinka masiibada ah ee soo noqnoqda ayaa si isdaba joog ah loo rogaa iyo taa beddelkeeda, koboc faa'iido aad u xoog badan.
Maxay Maalgalinta Qiimaha Wali U Shaqaysaa?
A maqaalka times maaliyadeed cinwaan looga dhigay “sababta maalgelinta qiimaha ay weli uga shaqeyso suuqyada” waxay ina siinaysaa tilmaam ku saabsan sababta ay weli u shaqeyso. Maqaalku wuxuu la xidhiidhaa halista iyo abaalmarinta.
Tan iyo markii la iibsanayo, saamiyadu waxay hoos u dhigi doonaan tarmooyin badan waxayna sugi doonaan in la helo waxaa loo fahmay inay tahay maalgelin qiime, waa aamin in la yiraahdo weli way shaqeyneysaa sababta oo ah isku xirnaanta waxa ka dhigaya shirkad qiimo ku leh warqadda iyo waxa ka dhigaya wax yar, waa mid aan caddayn.
Maqaalka ayaa laga soo xigtay isagoo ku sheegaya cutubyada gabagabada ah “maalgashadayaasha qiimaha aasaasiga ah waa inay diiradda saaraan farqiga u dhexeeya qiimaha iyo qiimaha dammaanadaha shaqsiyeed. Qiimaha hadda jira ee kaashka lacagta ee mustaqbalka, ee ma aha marin -habaabin badan, ayaa ah isha qiimaha.
Sida Charlie Munger, lammaanaha Warren Buffet ee Berkshire Hathaway ayaa yiri: 'Maalgashiga wanaagsan oo dhami waa maalgelinta qiimaha.' Qiyaasta qiimaha ayaa noqon karta mid is bedbedesha, laakiin maal gashiga qiimaha ayaa wali ah mid ku habboon oo waxtar leh weligiis. ”
Waa Maxay Celceliska Soo Celinta Markaad Maalgelinayso $ 10000?
Maskaxda ku hay in markaan ka hadlayno celceliska celceliska, waxaan ka hadlaynaa celceliska tusmada S&P 500 oo ka kooban ilaa 500 oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee Ameerika laga ganacsado waxaana loo tixgeliyaa qiyaasta halbeegga soo noqoshada sanadlaha ah.
Markay maalgashadayaashu dhahaan “suuqa,” waxay ula jeedaan S&P 500. Celceliska celceliska suuqa waa 10% sanadkii. Arrintani sidan ayay ahayd qarnigii la soo dhaafay.
Inkastoo tani ay tahay celceliska, suuqyadu ma aha kuwo toosan oo waxay u muuqdaan inay si degdeg ah u bararayaan, taasoo dhalisay kor u kaca qabashada qiimaha iyo soo laabashada suuqa sannadlaha oo aad uga sii badan. Si aad u sameyso celcelis celcelis ka badan, waxaad u baahan tahay inaad ciyaarto muddo dheer.
Waa Maxay Habka ugu Wanaagsan ee Loogu Maalgalin Karo $ 10000?
Talooyinkani waxay la yimaadaan malo awaalka ah in aad u furan tahay halis iyo in tani aysan ahayn lacagtii ugu dambaysay ee ku soo qulqulaysa. Waxaad dooran kartaa midkood sida ugu wanaagsan ee lagu maalgelin karo $ 10000.
#1 - Adigoo kaydinaya lacagta
Si aan u yeelano saameyn macno leh, marmarka qaarkood waa inaan dib u qaadnaa oo aan fiirineynaa sawirka weyn. Sawirka weyn ayaa laga yaabaa inuu naga caawiyo inaan aragno halka aan aadi karno. Kaydinta lacagtu waxay kaloo noqon kartaa mid waxtar leh.
Halkii aad hadda ka iibsan lahayd waxyaabo aan qiima intaas le'eg lahayn oo laga yaabo inay ku dambayso wax -qabad aan wanaagsanayn oo kugu dhaliya arrimo lacageed, waad sii haysan kartaa lacagta intii.
Adiga oo lacagta ku haaya sanduuq ay dulsaarku aad u badan yihiin, sicir -bararku si adag ugama qaniin, canshuurahana ma soo saaraan qaybtooda weyn, markaa habkaas, waxaad heli doontaa inaad koraan, oo waqtigaaga sug ilaa aad aakhirka diyaarsato leh dhaqaale badan iyo jihayn ka wanaagsan.
#2 - Kaydka shaqsiyeed
Arrin muhiim ah oo halkan lagu xuso ayaa ah in kala -duwanaanshuhu wanaagsan yahay. Gaaritaanka kala -duwanaanshahan ayaa ka adag lacagta yar ee aad haysato. Gaar ahaan marka aad bilowdo maalgashiga, waxaad naftaada u horseedaysaa khatar badan sababtoo ah kala duwanaansho la'aanta.
Gaaritaanka kala -duwanaanshahan ayaa ka adag lacagta yar ee aad haysato. Gaar ahaan marka aad bilowdo maalgashiga, waxaad naftaada u horseedaysaa khatar badan sababtoo ah kala duwanaansho la'aanta.
# 3 - Maal gasho naftaada
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loo maalgalin karo $ 10000 oo aad u leedahay rajooyin aad u wanaagsan si aad u hesho ilaa 5x lacagtaadu waa inaad naftaada maal gashato. Xirfadaha aad leedahay, waxbarashada, iwm. Haddii aad ka shaqaysay sidii aad u heli lahayd $ 10000, markaa habka aad u shaqayso ayaa la ballaadhin karaa si loogu diyaariyo inaad hesho marar badan lacagtaas.
Habkan, ma aha oo kaliya ag fadhida oo sugaya in la dhiso, laakiin waxay ku galaysaa adiga, barashadaada. Wax aan cidina kaa qaadi karin. Markaa u gudub koorsadaas ama barnaamijkaas aad waligaa doonaysay inaad samayso.
Ka dib markaad samayso cilmi-baaris habboon koorsooyinka kuu diyaarinaya inaad kasbato wax badan, u gudub koorsada akhris-qoraalka maaliyadeed, koorsada is-hagaajinta, kaliya ku fiicnaada adiga oo ku maalgeliya $ 10000 ama qayb ka mid ah adiga.
#4 - Maalgeli Cryptocurrencies
Kaliya maahan rave hadda, waa mustaqbalka. Satoshi Nakamoto wuxuu kacaan ka sameeyay dunida maaliyadda. Awooddu waa korsasho iyo adeegsi dhinacyo badan leh. Dad badan ayaa qaata cryptocurrencies, qiimaha sii kordhaya, iyo inta badan hoos u dhaca suuragalka ah sidoo kale.
Cryptocurrencies waxay ku siin karaan guulahaas muddada fog maadaama ay had iyo jeer kor u kacaan. Talada kaliya ee halkan ku jirta ayaa ah inaad naftaada wax baratid. Haa, naftaada wax baro sababtoo ah haddii aadan samayn, waxaad sidoo kale macsalaameyn kartaa lacagtaada.
Ka hel koorsooyin aaladaha sida Udemy, Kajabi, ama Teachable. Oo baro murugada waxyaabaha ganacsiga sida Seeraar, Ether, Litecoin, iyo kuwa kale. In kasta oo ay jiraan in ka badan 3000 cryptocurrencies oo jira, haddana maanta waa arrin yar.
Raadi is-weydaarsi, baar qaababka ganacsiga, raadi kala-jajabyada celceliska guuritaanka muddada-dheer, oo mashquul ganacsi.
#5 - Hantida ma guurtada ah
Hantida ma guurtada ahi waxay bixisaa socod lacag caddaan ah oo la saadaalin karo; way qaddarinaysaa, sidaas ayayna ula socotaa sicir -bararka; waxay bixisaa soo -celin sare sababta oo ah awood -qaadasho togan, waxayna bixisaa kobcinta sinnaanta iyada oo la dhimayo deynta.
Sababta ugu weyn ee ay maal -gashadayaal badan oo yaqaana sida loo maamulo hantida ma -guurtada u diidaan inay uga baxaan ayaa ah awood -siinta ay bixiso. Markaad ku dhisto meel sinnaan hantida hantida maalgashiga, waxaad ku maalgelin kartaa maalgashigaas lacag caddaan ah.
Damiin deyn labaad oo ka dhan ah sicirka kordhay ama dib u soo celi qaddarka amaahda asalka ah oo lagu daray saamiga kordhay. Kani wuxuu lacag u sii daayaa si uu u iibsado hanti kale oo maalgashi. Haddii $ 10000 aad u yar tahay inaad gasho meheraddan, waxaad heli kartaa dadka qaar inay sidoo kale lacag kugu soo tuuraan.
Sida wax walba, marka hore naftaada wax baro, maadaama ay ceeb tahay inaad lumiso lacagtaada oo dhan adigoo raadinaaya qaar kale.
Awood la'aanta aadanaha ee fahamka shaqada baaxadda leh waa marxalad ay dad badan ku dadaalaan inay ka gudbaan. Adiguna waa inaad sidaas samaysaa haddii aad doonayso inaad lacag ka badan intaad gelineyso.
Maaddaama dulsaarka isku -dhafan uu sii shaqeynayo, sidaas oo kale dad badani waxay sii wadaan inay raadiyaan saamaynta lacagtooda.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu maalgelin karo $ 10000; Maqaalkani wuxuu gacan ka geysanayaa in la qeexo 5ta hab ee ugu fiican ee ku wareejin kara $ 10,000 ama ka badan oo ah qiyaaso maaliyadeed oo aad u weyn.
Maxaan Ku Maalgashan Karaa 100 Doollar? Talada Khubarada ee 2022
20ka qaab ee ugu jaban ee aad naftaada ku maalgashan karto 2022| Talo-yaqaan
Sida Loo Maalgashado: Hagaha Bilowga ah ee Maalgelinta Suuqyada Hantida
13 Shirkadaha ugufiican ee bixiya Caymiska Xayawaanka ee 2022
Dib-u-eegida Amaahda PayPal 2022: Qiimeeynta, Astaamaha, Sharci ama Khiyaano
Sida Loo Iibsado Dhul-Beereedka Maalgelinta 2022| Hagaha Khabiirka
Taariikh ahaan, inta badan dhul -beereedka waa la iska dhaxlaa oo jiilba jiil baa loo gudbiyaa, taasoo ka dhigaysa maal -gashadayaasha “ciyaarta.”…
10ka Shaqaale ee ugu mushaarka badan Macallimiinta 2021
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay hal-ku-dheg ah in waxbarashadu tahay gundhigga guusha (ma aha kuwa wax barta oo keliya balse…
Sida Loo Bilaabo Meel Ganacsi Hoos -u -dhac ah 2022: Tusaha Ugu Dambeeya
Kharash dhimis waa muhiim marka aad ganacsi waddo. Markaad dhimo kharashaadka xad-dhaafka ah, waxaad dib u maalgelin kartaa…
Hubi Raalli ahaanshaha Si Qalad Ah; Samee Intaad Jeegsaneyso.
In kasta oo xaqiiqda ah in jeegaga aan si joogto ah loo isticmaalin sidii ay ahaayeen toban sano ka hor, iyagoo leh…
Boqolleyda Miisaaniyadda Arooska: Sida Loo Sameeyo Qoondayn | Tilmaan Buuxo
Burburinta boqolleyda miisaaniyada arooska waxay noqon kartaa mid ka mid ah hawlaha ugu adag ee muhiimka ah ee arooska…